We She Me: ကြက်ဆီထမင်း
pmmw - 7/13/08, 9:13 PM
imaginarycloudsno2 - 7/13/08, 9:56 PM
အန်ဒီ ခင်ဗျား အကြိုက်နဲ့ ကျနော် အကြိုက်က တော့ ဒီနေရာမှာ လုံးဝ ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ။ သေအောင်မုန်းတယ် အဲဒီ ကြက်ဆီ ထမင်းဆိုတာကို ။ လွယ်လွယ်ကူကူ နဲ့ ရလို့စားလာလိုက်တာ ဘဲကနေ ကြက်ရုပ်ထွက်တော့မယ် ။ အသားစားရတာ အချို ကုန်နေတဲ့ပီကေ ဝါးနေရသလို ။
Kyawt - 7/13/08, 11:12 PM
ThuHninSee - 7/14/08, 10:36 AM
sawphonelu - 7/14/08, 2:37 PM
အန်ဒီ ရေ ၊ ကိုယ် က တော့ ကြက် ဆီ ထမင်း ကို ၂ နှစ် လောက် တစ်ပ တ် ကို ၄ ရက် လောက် စားဖူးတယ် ။ အခု ထိ လဲ ဆိုင် သစ် တွေ့ ရင် ဝင် တီး လိုက် တာ ပဲ ။ ဒါ ပေ မယ့် နာမည် ကြီး ဆိုင် တွေ က တော့ မစားဘူး သေး ပါ ဘူး ။ ( ကိုယ် စား ဖူး တဲ့ ဆိုင် ထဲ က ဆို ရင် ) အခု ထက် ထိ အကြိုက် ဆုံး ဆိုင် ဆို ရင် တော့ NTU နား က BLK 909 နား က ဆိုင် က အကောင်း ဆုံး လို့ ထင် တယ်။ ဒီ ဆိုင် က အရင် နန့် ယန်း ၂၄ နာရီ ဆိုင် နား က ပြောင်း သွား တာ ပါ ။ ( အင်းပြော ရင်း နဲ့ Markan Lost & Found ဖြစ်သွား ပြီ ။ )
ဆိုင် တိုင်း က သူ့ စတိုင် နဲ့ သူ ရှိ သလို ထမင်း ၊ ကြက်သား ၊ အချဉ်ရည်၊ ဟင်းချို တစ်ဆိုင်နဲ့ တစ်ဆိုင် မတူ ပါ ဘူး ။
မြရွက်ဝေ - 7/15/08, 3:17 PM
နောက်တခါ ချက်ဖြစ်ရင် ဒီက ချက်နည်းကို ဖတ်ပြီး လုပ်ကြည့်ရမယ်။ ကုန်းထက်ကြက်ဆီထမင်းလို ကြက်သားက အရောင်လှအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရလဲကော သိလားဟင်?
Andy Myint - 7/20/08, 5:31 PM
တခါတလေတော့လည်း ခံစားမိမှာပေါ့ မောင်တိန်။ အရသာမဲ့ ကြက်သားတုံးကြီးကို ၀ါးနေရတဲ့ ဘ၀က အရသာမဲ့သလိုမျိုး။
ခြောက်နှစ်တောင် မမုန်းတမ်း စားခဲ့တယ်ဆိုတော့ တကယ်ကြိုက်လိုပဲ ဖြစ်မယ် ကျော့
ချက်စား မသုနှင်းဆီ။ ဘလောက်မှာ ပြန်တင်လိုက်ဦးလေ။
ဟုတ်တယ် ကိုစော ကျွန်တော်က စဉ်းစားလို့ မရရင် ကြက်ဆီထမင်းပဲ စားလိုက်တယ်။
အဲဒီလိုတော့ မသိပါဘူး မမြရွက်ဝေ။
Anonymous - 3/24/11, 9:20 PM
I love this reciepe. I had made many times with ur reciepe.
ကို့ညီမ - 3/27/13, 7:39 PM
Wa Thone - 5/24/13, 4:07 AM
Wa Thone - 5/24/13, 4:09 AM